नेपालका ३५ लाख एटीएम कार्ड जोखिममा, पिन नम्बर तत्काल बदल्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरको गिरोह नेपालमा सक्रिय – shubhabihani
Home / अपराध / नेपालका ३५ लाख एटीएम कार्ड जोखिममा, पिन नम्बर तत्काल बदल्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरको गिरोह नेपालमा सक्रिय
Posted by: admin in अपराध November 7, 2016	Comments 370 Views
२२ कात्तिक, काठमाडौं । करिब २ वर्ष अगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले एक टर्किस नागरिक मेहमत गुलेनलाई नेपालका एटिएम बुथबाट झिकिएको २६ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गर्‍यो । नेपालमा आएर अर्काको एटीएमबाट पैसा चोरी गरेको आरोपमा गुलेन पक्राउ पर्नुलाई सीआइबीले नौलो घटनाको रुपमा लिएको थियो । यस्ता घटनालाई खासै चासो नदिएको सीआइबी तब झस्कियो जब अनधिकृत रुपमा रकम झिक्ने विदेशी नागरिकहरुको खुलासा हुँदै गयो ।
कसरी अपनाउने सुरक्षा ?
Previous: सुजाता कोइराला लाई खुला पत्र ……….
Next: अयोग्य लडाकुले पेरिसडाँडा कब्जा गरे (भिडियो)